Ryanair ji njikọ Shannon ọhụrụ bulie ụzọ Budapest
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ryanair ji njikọ Shannon ọhụrụ bulie ụzọ Budapest
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Hungary na -agbasa akụkọ • Akụkọ Mgbasa Ozi Ireland • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Njikọ a na-eme kwa izu abụọ na-amalite na 1 Nọvemba ma ọ ga-apụta na ụgbọ elu Irish na-arụ ọrụ 81% nke ọrụ Budapest na Ireland.
Ryanair na -akwado mgbasa Budapest.
Ụgbọ elu ọhụrụ na -enye mgbakwunye dị mkpa na njikọ ọnụ ụzọ Hungary na Ireland.
Ọrụ ọhụrụ ga -adị mkpa n'ịkwalite njikọ Budapest n'ofe Ireland.
Oge oyi a Ọdụ ụgbọ elu Budapest ga -abawanye netwọkụ Irish ya Ryanair, dịka onye na-ebu ụgbọ ala dị ọnụ ala gosipụtarala njikọ ọhụrụ na Shannon.
Njikọ a na-eme kwa izu abụọ na-amalite na 1 Nọvemba ma ọ ga-apụta na ụgbọ elu Irish na-arụ ọrụ 81% nke ọrụ Budapest na Ireland. Ọ na -enyekwa mgbakwunye dị mkpa na njikọta ọnụ ụzọ Hungary na Ireland, yana Shannon dị n'etiti ụzọ njem nlegharị anya nke Wild Atlantic Way n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke mba ahụ.
Balázs Bogáts, onye isi ụgbọ elu ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ elu Budapest na-ekwu, sị: “Mgbasawanye nke Ryanair nke maapụ ụzọ anyị na-akwado nkwado anyị na-ele anya n'ihu ọ bụghị naanị ịmalitegharị netwọkụ anyị, kamakwa na-emepekwa njem njem na njikọ azụmahịa."
Bogáts gbakwụnyere, "isonye na ọrụ anyị na -ewu ewu na Dublin, ọrụ a ga -adị oke mkpa n'ịkwalite njikọta anyị na Ireland niile."